Inona ny atao hoe automatisation robotic process? | Martech Zone
Zoma, Martsa 29, 2019 Zoma, Martsa 29, 2019 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo mpanjifa miara-miasa amiko dia nampahafantatra ahy orinasa iray mahavariana izay mety tsy fantatry ny mpivarotra akory. Ao amin'ny Fandinihan-dry zareo momba ny fanovana eo amin'ny toeram-piasana notendren'i Teknolojia DXC., Futurum Hoy:
Ny RPA (automatique robotic process) dia mety tsy ho lohalaharana amin'ny fampahalalam-baovao toy ny taloha fa ity teknolojia ity dia niasa tamim-pahanginana sy tamim-pahombiazana tamin'ny teknolojia sy ny departemanta IT satria ny orinasam-pandraharahana dia mitady hamita ny asa miverimberina, mampihena ny vidiny, mampitombo ny marina ary ny fahaiza-mandanjalanja, ary mifantoka indray amin'ny talentan'ny olombelona amin'ny lahasa avo kokoa.
Toerana fiasana sy fanovana nomerika
9 Hevitra lehibe manimba ny hoavin'ny asa
Ao amin'ny fotony, Robotic Process Automation (RPA) dia lozisialy mifandraika amin'ny rindrambaiko hahomby kokoa. Araka ny fantatsika rehetra, ny firafitry ny haitao orinasa dia mitohy manitatra ary manana rafitra sy fomba fiasa eo an-toerana, ivelan'ny toerana, fananana ary an'ny antoko fahatelo.
Sahirana ny orinasa mampiditra ny sehatra, matetika tsy maharaka ny fandrosoana mitohy. Ny rindrambaiko RPA dia mameno io banga tena ilaina io. Ny rindrambaiko RPA matetika dia ambany kaody na sehatra tsy misy kaody izay manome interface tsotra ho an'ny mpampiasa hananganana fampiasa mpampiasa manokana na hanetsehana ny fizotrany. Ka raha ny ERP anao dia SAP, ny Marketing Stack anao dia Salesforce, eo amin'ny Oracle ny ara-bolanao ary manana sehatra am-polony hafa ianao… misy vahaolana RPA azo apetraka haingana hampifangaro azy rehetra.
Topazo maso ny anao Fomba fizarana sy fivarotana. Mampiditra fampahalalana miverimberina manerana ny efijery na rafitra marobe ve ny mpiasao? Mifindra miverina miverimberina angona avy amin'ny rafitra iray mankany amin'ny iray hafa ny mpiasao? Ny ankamaroan'ny fikambanana dia… ary eto no ahazoan'ny RPA fividianana vola azo antoka.
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny mpampiasa sy ny fampihenana ny olan'ny fidirana data, mora kokoa ny mampiofana ny mpiasa, tsy dia sosotra loatra, ny fahatanterahan'ny mpanjifa dia marimarina kokoa, misy ny fihenan'ny olana ambany, ary ny tombom-barotra amin'ny ankapobeny dia nitombo. Miaraka amin'ny fanavaozana ny vidiny amin'ny fotoana tena izy amin'ny rafitra rehetra, ireo orinasan'ny ecommerce dia mahita ihany koa ny fitomboan'ny fidiram-bola.
Misy ny dingana afovoany izay azo ovaina amin'ny RPA:
nanatrika - mamaly ny fifandraisana amin'ny mpampiasa ny rafitra. Ohatra, Clear Software dia manana mpanjifa misy écran 23 ao amin'ny ERP azon'izy ireo nanjary nianjera tamina interface iray tokana. Io dia nampihena ny fotoana fampiofanana, nanatsara ny fanangonana angon-drakitra ary nampihena ny isan'ny lesoka (tsy lazaina intsony ny fahasosorana) ataon'ireo mpampiasa rehefa miditra amin'ny fampahalalana.
nikarakara - ny rafitra dia miteraka fanavaozana izay mifandray amin'ny rafitra maro. Ohatra iray mety ny manampy mpanjifa vaovao. Raha tokony ampidirina ao amin'ny rafitry ny rafitra ara-bola, ecommerce, fanatanterahana ary varotra azy ireo… Ny RPA dia maka sy manivana ary manitsy ny angon-drakitra ilaina ary manavao azy ireo ho azy ny rafitra rehetra amin'ny fotoana tena izy.
manan-tsaina - Ny RPA, toy ny teknolojia hafa rehetra, dia mampiditra faharanitan-tsaina hanaraha-maso ary hametraka ho azy ny botika hanamafisana ny fizotrany manerana ny fikambanana.
Ny rafitra RPA any an-tsekoly sasany dia miankina amin'ny sccraping sy ny fipetrahana amin'ny tanana amin'ny tanana. Ny rafi-baovao RPA vaovao dia nampiasa fampidirana novokarina sy natosiky ny API mba tsy hanapotehina ny fampidirana ireo fanovana eo amin'ireo atontan-taratasin'ny mpampiasa.
Manana fanamby tokoa ny fampiharana RPA. Ny mpanjifako, Clear Software, dia nanoratra topy miavaka momba ny RPA sy ny fomba hisorohana ny fandrika amin'ny fampiharana RPA.
Sintomy ny fomba tsara kokoa amin'ny RPA
Tags: APIautomatiquerindrambaiko mazavaCRMdxcfuturumfampidiranajon gilmanOraclemandoa volaotcfizarana fizarana roboticrpasalesforceSapuser experienceMpampiasa interface
Blockchain - Ny hoavin'ny teknolojia ara-bola